Salaamanews » Midowga Culimada Soomaaliyeed oo gaaray go’aamo ka dhan ah kooxda al-Shabaab
Home » Warar Midowga Culimada Soomaaliyeed oo gaaray go’aamo ka dhan ah kooxda al-Shabaab Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 19th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Puntland oo furtay xarun dalxiis (Sawirro)Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaDaawo: shil diyaaradeed midkii ugu xumaa oo ka dhacay KhazakhstanXayiraadda hubka ee wali saaran Soomaaliya oo halis ku ah guulaha ammaan ee SoomaaliyaCiidamada dowladda oo si xoog ah al-Shabaab uga qabsaday deegaanno ka tirsan Jubbada hoose (Salaamanews)-Midowga Caalamiga ah ee Culumada Muslimiinta ee uu madaxda ka yahay Sheekh Yuusuf al-Qardaawi ayaa bayaan ka soo baxay Axaddii wuxuu si kulul ugu cambaareeyay dilkii Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax.
Culumada Islaamka waxay dilka Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax ku tilmaameen mid xad-gudub ah oo ka fog diinta Islaamka, waxayna ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan kuwa dilay sheekha.
Hay’adda culumada Islaamka ayaa ku eedeysay dilka Sheekh Cabdiqaadir inay ka dambeeyaan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaallamaya Soomaaliya, kuwaasoo faham khaldan ka qaatay diinta Islaamka.
Hay’adda waxay Sheekh Cabdiqaadir ku tilmaamtay inuu ahaa caalim lagu bartay geesinnimo marka ay timaaddo sheegidda xaqa iyo faafinta diinta Islaamka gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba.
Midowga Caalamiga ah ee Culumada Muslimiinta ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed iyo ehelada Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax inay sabraan, wuxuuna Alle uga baryay inuu geeyo jannatul Firdowsa.
Alle ha u naxariistee, Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax ayaa Jimcihii la soo dhaafay lagu dilay gudaha masaajid ku yaalla magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland isagoo tukanayay salaadda Casar.
Info@salaamanews.com Tags: warar « Qoraalkii HoreMahiga “Waan ka xunahay amni xumida wali jirta”	Qoraalka Xiga »AMISOM oo deeq gaadhsiisay cisbitaalka Beledweyne	Halkan Hoose ku Jawaab